Kooxda Manchester United oo go’aamisay mustaqbalka Alexis Sánchez – Gool FM
Kooxda Manchester United oo go’aamisay mustaqbalka Alexis Sánchez
Dajiye August 10, 2019
(Manchester) 10 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa diyaar u ah inay sii heysato adeega weeraryahankeeda reer Chile ee Alexis Sánchez xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020.
Hadalkan kasoo yeeray saraakiisha kooxda Manchester United ayaa wuxuu imaanayaa kaddib markii ay Romelu Lukaku ka iibiyeen Inter Milan, isla markaana aysan u dhaqaaqin saxiixa weeraryahan cusub, taasoo la dhihi karo waxay ku qasbanaadeen inay sii heystaan Alexis Sánchez.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday kahor kulankooda daah furka horyaalka Premier League xili ciyaareedka cusub ay maqribnimada bari oo axad ah kula ciyaari doonaan kooxda Chelsea wuxuu qiimeyn ku sameeyay dhaqadhaqaaqii ay ka sameeyeen suuqan xagaaga.
Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay:
“Lacag ayaa jiri karta hadii uu jiro ciyaaryahan sax ah, kaddib markii uu xirmay suuqa xagaaga, waxaan dareemayaa xasilooni, waana ku qanacsanahay dhaqdhaqaaqyadii aan ka sameynay”.
“Taageerayaashu waxay rabaan inay arkaan marwalba inagoo iibsaneyna ciyaartoy, laakiin ma jirin wax badan oo aan qaban karnay, waa inaan hada kalsooni siinaa wiilasha aan heysano ee xiran maaliyada Manchester United iyo qof walba ee nala jooga”.
Intaas kaddib tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu u soo jeedstay inuu si gaar ah kaga hadlo mustaqbalka Alexis Sánchez ee kooxda Manchester United wuxuuna yiri:
“Waxaan filayaa inuu nala sii joogi doono. waa weeraryahan dhalin kara goolal badan, haddii uu si fiican u sameeyo tababarka, waxaa suuragal ah inuu helo fursado badan”.
Tababare Valverde oo qaab niyadjab ah kaga hadlay mustaqbalka Ivan Rakitić ee kooxda Barcelona
Tababare Unai Emery oo shaaca ka qaaday suurtogalnimada ay ku fasixi karaan qaar ka mid ah xiddigaha Arsenal